Indlu esemaphandleni yokuzinika ukutya eNyanga, eZim upande weZimiliya - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yokuzinika ukutya eNyanga, eZim upande weZimiliya
Sanyatwe, Manicaland Province, Zimbabwe
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLennart
Indawo kaLenn izilungele iintsapho (ezinabantwana), abantu abahamba ngeenyawo nabahambi abasemaphandleni ngebhajethi.
Kulula ukuyijonga xa usuka kwindledlana eyintloko, ziimitha eziyi-900 kuphela kwindlela entle eyakhiwe ngamatye Akukho mfuneko YE-4X4. Indawo yokumisa ibhasi ikude ngeemitha eziyi-200 kuphela ukuze ufike uze uhambe, ngebhasi yasekuhlaleni.
Le ndlwana isandul 'ukulungiswa inendawo entle yokubuka intlambo i-Msasa kunye neetshona zelanga ezintle phezu kweentaba, le ndlu isandul' ukulungiswa inikezela ngebhajethi yokuhlala kwi-Eastern Highlands.
Ilungiselelwe iintsapho, abantu abahamba ngeemitha eziyi-900 kuphela ukusuka kwindledlana eyintloko ye-Traape. Akukho mfuneko yokuba kubekho imoto emine ngeemoto ezine ukuze ungene kule ndlu!.
Amaxabiso yi- usd 20.00 pppn kundwendwe lokuqala, iindwendwe ezongezelelekileyo ziyi-10.00 pppn. Indawo yeLenns inamagumbi okulala amabini alula, ngalinye lilala abantu abane. Ibhedi enye ekuthiwa yiKumkanikazi kunye nebhedi engentla kwenye. Iyonke abantu abasibhozo. Ukuba kukho iibhedi ezingakumbi ezifunekayo, iibhedi ezingakumbi zingafakwa kwi-rondavel, Kukho igumbi lokuhlambela elisetyenziswa nangabanye abantu.
Amaxabiso akhethekileyo ayafumaneka ixesha elide.
Kukho ikhitshi elincinci kunye nendawo yokutyela kwi-rondavel evulekileyo kunye nendawo ye-braai yangaphandle.
4.60 out of 5 stars from 72 reviews
4.60 · Izimvo eziyi-72
Indawo kaLenn ifumaneka ehlathini laseMsasa. Kukho iindawo ezintle kwintlambo i-Msasa kunye neentaba ezikude.
Umbuki zindwendwe ngu- Lennart